Waan Dhirbaaxi Doonaa – Feedhyahan Ku Hanjabay Inuu Madaxa Dhulka Ugu Dhufan Doono Brock Lesnar – Cadalool.com
Waan Dhirbaaxi Doonaa – Feedhyahan Ku Hanjabay Inuu Madaxa Dhulka Ugu Dhufan Doono Brock Lesnar
November 2, 2018 Abdiwahab A. Abeye
Daniel Cormier oo ciyaara feedhka miisaanka culus iyo legdinta iskuga jira ee UFC 230 ayaa digniin u diray xiddiga Musaaricada WWE ee Brock Lesnar oo kusoo biiray ciyaartooyada UFC, ka hor kulanka Sabtida ay ciyaari doonaan Derrick Lewis.
Lesner ayaa bishii July ee sannadkan gudaha usoo galay garoon ay ka socotay ciyaar feedh ahayd oo Cormier uu ku qaaday suunka feedhka miisaanka culus ee UFC, waxaana Brock Lesnar isku dayey inuu carqalad ka dhex abuuro gudaha garoonka, isaga oo kala tuuray Cormier oo aan xilligaas gacan qaadin maadaama uu daallanaa oo markaas uun ay dhamaatay ciyaartii uu suunka ku helay oo uu ka adkaaday Stipe Miocic.
Daniel Cormier ayaa Sabtida la ciyaari doona Lewis, waxaase la filayaa in mar kale uu gudaha garoonka soo galo Lesnar, hase yeeshee Daniel Cormier ayaa ballan ku qaaday inuu gacanta ula tegi doono oo aanu sinaba u cafiyi doonin maadaama mar hore uu ku gardarrooday.
“Markan waxa aan kula talinayaa inuu dibedda ka joogo garoonka, sababtoo ah markii hore wuu i riixay xayndaabka dhexdiisa, aniguna waan necebahay muuqaalkaas. Markan waan riixi doonaa ama madaxa ayaan dhulka ugu dhufan doonaa.” Sidaas ayuu yidhi Cormier.
Cormier iyo Lesnar ayaa la sheegay inay suurtogal tahay inay wada ciyaaraan, iyadoo horena loo tibaaxay ka hor intii aanay is ballansan Lewis inay iska hor iman doonaan labadoodu, hase yeeshee weli waxa suurtogal ah in labadan libaax ay mar xayndaabka isku xidhaan.